Maalinta: Diseembar 8, 2019
Liiska gu'ga 2020 ee murashaxiinta ku tababari doona tababar xirfadeed oo ku dhex yeelan doona Agaasimaha Guud ee TÜVASAŞ ayaa la shaaciyey.
Sarkaalka haweenka ee loo yaqaan 'Eskişehir Metropolitan Women Parkomat Sarkaalka ayaa heli doona; Dowlada hoose ee magaalada Eskişehir ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay shaqaaleysiinayso darawallada basaska haweenka iyadoo lala wadaagayo akoonnada warbaahinta bulshada iyo murashaxiinta haweenka ah ee darawallada buuxiya shuruudaha degmada. [More ...]
Shirkadda Bursa Metropolitan degmada Gaadiidka site Burulaş in Bursa Sea Basaska (BUDO), Turkey Basketball 1. Noqday magaca kafaalaqaaday Naadiga Kubadda Koleyga ee Gemlik, oo ku dhibtooday Horyaalka. Siinta hoolal isboorti xarumaha waxbarasho ee Bursa, hiwaayadda [More ...]
Turkey, ayaa online tan sano 1973 iyo qalabka dhismaha buuxiyo farqiga aad muhiim u ah in mustaqbalka tab ugu horeysay oo kaliya qalab cusub DHISMAHA saarney ee buugga, hadda waa nool! ISKUULKA DHAQANKA, ballaaran [More ...]